Wasaaradda waxbarashada XFS oo maanta ka qeyb gashay Isxilqaan”SAWIRRO” – Banaadir Times
Wasaaradda waxbarashada XFS oo maanta ka qeyb gashay Isxilqaan”SAWIRRO”
By banaadir 23rd November 2020 146 No comment
Mas’uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) ayaa maanta ka qeyb galay ololaha Isxilqaan wareegiisa 16-aad.
Ololaha ayay howlwadeennada Wasaaradda Waxbarashada ka fuliyeen maanta dhismaha Guriga hooyinka Qaranka ee lagu maamuusay (Hooyo Baxsan) kaasi oo ka mid ah xarumaha danta guud ee lagu dhisayo Isxilqaan.
Isu duwaha ololaha Isxilqaan Ismaaciil Cali Cabdullaahi ayaa shaqaalaha dowladda ku ammaanay dadaallada dib u dhiska dalka, isagoo wasaaradda waxbarashada uga mahadceliyay kaalinta ay ka qaadaneyso ololaha.
Barnaamijka Isxilqaan ayaa ah barnaamij qiimo wey u leh bulshada Soomaaliyeed, isla markaana lagu dhisayo xarumaha danta guud, kuwaasi oo haatan meel gabo gabo ah maraya dib u dhiska kooda.
Shirka Musharaxiinta Madaxweynaha oo maanta la filayo in lasoo gabagabeeyo iyo war murtiyeed….
Kororka Koroona & kala sareynta Dalalka Caalamka!
Puntland oo digniin u dirtay Shaqaalaha Hay’adaha UN-ka
By banaadir 31st March 2021
By banaadir 13th January 2021
Golaha Ammaanka oo baaq deg deg ah kasoo saarray khilaafka doorashada Soomaaliya
By banaadir 1st April 2021